Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Airlines dia tsy maintsy manangana fiaraha-miasa misy dikany mba hiatrehana ny fitohizan'ny tontolo iainana
Ireo mpitsangatsangana dia azo inoana fa voataona amin'ny fomba ara-tontolo iainana namana na vokatra.
Ny fampihenana ny fampiasana plastika sy ny fampiasana akora ilaina amin'ny tontolo iainana dia tsy ampy hamahana ny olana maharitra
Ny zotram-piaramanidina dia tsy maintsy mandray ny hetsika rehetra azo atao mba hiantohana ny mpandeha tsy hisafidy fitaterana hafa
Mampidi-doza ireo mpandeha mitsambikina amin'ny safidy mora kokoa amin'ny tontolo iainana
Amin'ny alàlan'ny fananganana fiaraha-miasa misy dikany izay miompana amin'ny antony fototry ny seranam-piaramanidina dia hanome azy ireo fotoana mety ho tonga mpitarika ny tontolo iainana ao anatin'ny indostrian'izy ireo. Ny fampihenana ny fampiasana plastika sy ny fampiasana fitaovana ara-tontolo iainana dia tsy ampy hamahana ireo olana maharitra sy ny maro hafa tokony hatao.
Ny mpitsangatsangana dia mihombo hatrany ny fitaoman'ny fomba amam-bika ny vokatra na serivisy amin'ny tontolo iainana, miaraka amin'ny fanadihadiana momba ny mpanjifa Q1 2021 izay manambara fa ny 76% amin'ireo mpamaly manerantany dia 'foana', 'matetika', na 'indraindray' mitaona an'io antony io ihany koa. tahaka ny maha etika / andraikitra ara-tsosialy ny vokatra na serivisy.
Mba hahazoana ny fahalalana sy ny fahaiza-manao hiatrehana ireo olana lehibe kokoa, ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia mety hahazo tombony amin'ny orinasa miasa eo amin'ny sehatry ny faharetana na ny fanaovana fiaraha-miasa stratejika. Mitovy amin'ny fomba nahazoan'ny orinasa Delta Air Lines fanadiovan-tsolika ny taona 2012 mba hahazoana fiarovana amin'ny famatsian-tsolika, dia tokony hikatsaka hanao toy izany koa ireo orinasam-pifandraisana amin'ny orinasa biofuel. easyJet dia niara-niasa tamin'i Wright Electric tamin'ny taona 2017 mba hamorona fiaramanidina elektrika afaka manidina lavitra. Wright Electric dia manana ny fahaizana manokana hanatanterahana izany, ary easyJet dia liana amin'ny fotokevitra lasa zava-misy.
Mba hiadiana amin'ny hetsika mahamenatra ny sidina dia tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra ny zotram-piaramanidina mba hiantohana ny mpandeha tsy hisafidy fitaterana hafa, indrindra amin'ny zotra lavitra. Rehefa lasa malaza kokoa ny dia an-dalamby mandeha amin'ny herinaratra - miaraka amin'ireo tambajotra midadasika manerana an'i Eropa sy Azia - mety hampidi-doza ireo mpandeha hitsambikina amin'ny safidy mora kokoa amin'ny tontolo iainana. Raha miadana ny fandrosoana amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia mety ho lavitra ny vokany.
Betsaka ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka no nandefa ny paikady fanonerana karbona, nampihena ny fampiasana plastika ary niasa ho lasa sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana, saingy ireo fandresena kely ireo dia tsy ampy hiatrehana ilay olana lehibe kokoa. Ny fampiasam-bola amin'ny solika maharitra fiaramanidina maharitra (SAF) sy ny fiaramanidina misy herinaratra hafa no dingana manaraka, ary ny fiaraha-miasa misy dikany dia ho lakilen'ny fanatanterahana ireo fotokevitra ireo.
IAG vao haingana nanolo-tena amin'ny fampiasana SAF 10% tamin'ny 2030. Miaraka amin'ny ambaratongan'ny vondrona fiaramanidina toa ny IAG, dia ho hendry ny fampiasam-bola amin'ny toeram-pivarotana natokana. Izy io dia hanome fiarovana ny famatsiana ary mety hamela ny fanoloran-tena hihoatra. Ny fampanjariam-bola toa izao dia mety ho làlana mandroso hamorona toe-javatra mandresy ho an'ny zotram-piaramanidina rehetra mitady ny hamahana ny olan'ny mpandeha momba ny faharetan'ny dia an-dranomasina sy hanaporofoana ny asany amin'ny ho avy.
Ny areti-mandoza COVID-19 dia namela ny zotram-piaramanidina sy ireo mpiantsehatra indostrialy hihemotra ary hifantoka amin'ny fandraisana andraikitra hanafainganana ny fandrosoana atao ankehitriny mba hahatonga ny fiaramanidina ho maitso kokoa. Miaraka amin'ny mpandeha mora mihodina amin'ny safidy hafa, safidy fitaterana maitso kokoa amin'ny zotra lavitra, dia tsy maintsy mitady fiaraha-miasa fiaraha-miasa ny seranam-piaramanidina mba handroso bebe kokoa amin'ity toerana ity ary hiarovana ny ho avin'izy ireo.